Trump oo lala cararay kaddib markii qof lagu toogtay meel u dhow Aqalka Cad. - NorSom News
Trump oo lala cararay kaddib markii qof lagu toogtay meel u dhow Aqalka Cad.
Trump ayaa lagala carayay shir jaraaíd oo uu shaley aqalka cad ku qabanayay, markii qof lagu toogday afaafka hore ee madaxtooyada aqalka cad ee dalka Mareykanka.
Madaxwenaha Mareykanka Donald Trump ayaa marka uu dhamaaday howlgalka, dib ugu soo noqday shirkiisii jaraa´idy, wuxuuna la hadlay saxaafada, isaga oo sheegay in qof lagu toogtay goob u dhow Aqalka cad ee Mareykanka, balse ay boolisku gacanta ku dhigeen qofkii falkaas ka danbeeyay oo dhaawac ah.
Mr Trump ayaa weriyeyaasha u sheegay “iney u muuqato in haatan xaaladda la xakameeyay”.
Xigasho/kilde: Trump avbrøt pressekonferanse – skyting utenfor Det hvite hus.
Previous articleDuq magaalo oo dadkiisa uga digaya inaysan Oslo u safrin.
Next articleMaamulka Oslo oo arrimahan raba inay sameeyaan.